Jona 17, 2019 ecommerce 3G & Wireless karatra, Electronics, Networks, OS-STORE, OSGEAR Support, Products, teknolojia 0
Solosaina tsy tonga foana Bluetooth-vonona. Solosaina tsy naorina-in Bluetooth fahaiza-manao mifandray amin'ny Bluetooth Wireless fitaovana noho ny fanampian'ny mpandray kely izay plugs ho USB seranan-tsambo eo amin'ny solosaina.
Automatic fametrahana >>>
Ny saofera ny USB Bluetooth adaptatera dia nahatonga fa hametraka mandritra ny fametrahana. Raha toa ka tsy mahita ny avy hatrany ary no fametrahana ny voalohany, azafady antoka misy Firewall na Antivirus dia kilemaina fangatahana fa tsy fitsabahana na fanakanana ny fametrahana. Mety hahatonga ny Firewall na Antivirus fampiharana indray mandeha indray izany dia efa napetraka.
1. Open Device Manager amin'ny alalan'ny fikarohana ny “mpitantana Fitaovana” in-piandohan'ny sakafo na hanomboka efijery.
2. Toerana ny USB fitaovana ao an-Device Manager lisitra (matetika eo ambany fizarana fitaovana hafa).
Fanamarihana: Ny anaran 'ny fitaovana sy ny sokajy araka ny hita eto ambany Mety tsy hitovy.
3. Right tsindrio eo ny fitaovana sy ny tsindrio Update Driver Software…
4. Ao amin'ny Update mpamily Software, Magicien tsindrio Browse ny ordinatera ho an'ny mpamily rindrambaiko.
5. Tsindrio Mamelà ahy haka avy ny lisitry ny fitaovana mpamily teo amin'ny solosaina.
6. Safidio ny Show fitaovana rehetra ary tsindrio Next. Tsindrio eo amin'ny Manana kapila… bokotra.
7. Tsindrio Browse ary hamakivaky ny mpamily ny fampirimana ao amin'ny fametrahana lahatahiry. By toerana misy anao, ny toerana dia: “C:\_Program Files (x86)…
8. Mety mandray ny Update mpamily Fampitandremana diniky nilaza fa ny fampiharana ny mpamily tanana dia mety hahatonga ny fitaovana mba hampitsahatra miasa. Tsindrio Eny hanohy.
9. Ny Magicien dia hampihatra ny mpamily vaovao sy tatitra fahombiazana. Tsindrio Close hamita ny Magicien.
Bluetooth mpamily Windows XP >>>
1.Plug ny Bluetooth adaptatera ho any amin'ny solosaina ny USB seranan-tsambo
2. Installation ilay mpamily Le Magicien hita. Araho ny dingana etsy ambany. Mijery sy hifidy ny lahatahiry izay no misy ny mpamily.
Bluetooth mpamily varavarankely 8 >>>
1. plug ny Bluetooth adaptatera ho eo an-solosaina ny USB seranan-tsambo
2. Mametraka ny mpamily ao amin'ny rafitra
2.1 Ny rafitra dia mametraka ny mpamily mandra-mpamily fametrahana mahomby
Tsindrio Start -> Computer Settings -> Control Panel -> Fitaovana sy ny Printers. Jereo ny kisary etsy ambany, izay midika hoe efa nahavita.
2.2 Raha tsy mahavita ny mpamily hametraka avy hatrany
Tsindrio Start -> Computer Settings -> Control Panel -> Fitaovana sy ny Printers ka jereo ny kisary etsy ambany
Double Tsindrio eo amin'ny fitaovana tsy fantatra, mifidy: Hardware, Click: Properties
Select: Mijery ny solosaina ho mpamily rindrambaiko
Browse, mifidy ny lahatahiry izay no misy ny mpamily, ary tsindrio: Manaraka
Vita ny fametrahana "Vitao ny’ >>>
Tsindrio ny “farany” bokotra, rehefa vita ny fametrahana izay. Restart ny solosaina, raha nanosika. A Bluetooth kisary hita ao amin'ny fampahafantarana ny biraonao faritra miorina ao amin'ny ambany-havian'ny efijery. Bluetooth fifandraisana izao afaka amin'ny solosaina findainy.
Right-tsindrio ny “Bluetooth” Icon ary fidio ny safidy maromaro amin'ny Bluetooth iray hafa-afaka fitaovana, hijery ny fifandraisana misy Bluetooth, ampiendrehina ny adaptatera na hanakana ny Bluetooth fitaovana.
More Tech-baovao, Kitiho eto
fandikana ara-dalàna Samsung mpamily fanohanana mpitantana Fitaovana Intel teknolojia Finday Series Driver Support OS-STORE Unité centrale Technology_Internet HD Graphics HTC processors Device Model Nokia 64-kely Windows Software Processor Public Tanjona
mpitantana Fitaovana Sony Ericsson Public Tanjona fandikana ara-dalàna HTC Qualcomm OS-STORE Unité centrale Series Driver Support Finday Device Model Nokia Samsung Technology_Internet Intel Processor Samsung Galaxy Intel Server processors 64-kely Windows teknolojia finday avo lenta mpamily fanohanana HD Graphics Software